Sharciga ku saabsan mamnuucidda takooridda ee suuqa shaqada iwm.
Sharciga ku saabsab mamnuucidda eexashada ee suuqa shaqada iwm. Waa mamnuuc eexashada tooska ah iyo tan dadban ee loogu duurxulayo: sinjiga, midabka, diinta ama rumaynt, aragtida siyaasadeed, dareengalmeedka (seksuel orientering), da’da, naafada ama jinsiyadda, Kaalinbulsheedda qofka ama qolada laga soo jeedo. (sharax kastaa waxa uu ku xidhiidsan yahay qoraal (link)
Waxa ay taasi ku saabsan tahay mushahaaro qaatayaasha ama codsadayaasha shaqooyinka banaan ee shaqaalaynta, shaqo kacaydhinta, bedelaadda, dallicinta ama wax ku saabsan mushahaarada iyo xaaladda shaqada. Shaqobixiyuhu waa in aanu u kala eexan shaqaalaha dhinaca suurtogalka talosiinta shaqada, waxbarashada shaqada, dib u tababaridda shaqada iyo naqtiimidda dugsiga. Mamnuucidda eexaashadu waxa ay khusaysaa oo kale qof kasta, oo hogaamiya shirkad talobixineed iyo shirkad waxbarasho iyo mid kasta xilsaaran shaqaalayn. Waxa kale oo uu khuseeyaa qof kasta oo xeer dejiya oo go´aan ka gaadha hawlgelinta shaqo madaxbannaan. Isla markaas waxa uu saaranyahay mid kasta oo go´aamiya xubinnimada iyo kaqaybgalka ururka shaqaalaha ama ururka shaqobixiyaha ama ururada ay xubnahoodu qabtaan shaqo gaar ah, waxa halkan hoos imanaya faa´iidooyinka ay ururadaasi siiyaan xubnaha.
Sharcigani waxa uu khuseeyaa shirkadaha gaarka ah iyo kuwa dadweynaha.
Kala xidhiidh qoraalka sharciga - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=122522
Sharcigaa xaqsoorka dumarka iyo ragga
Tixraac sharciga sinaanta dumarka iyo raga, midna waa in aanu kan kale kula kicin eexasho toos ah iyo mid dadban toona isaga oo ugu duurxulaya jinsiga. Sharcigu waxa uu saaran yahay shaqobixiye kasta, maamul, urur hoos yimaadda maamul dadweyne iyo shurkad daydweyne, iyo maamulada iyo ururada iyo dhamaan dadka keena alaabta iyo adeegyada ku xidhiidhsan dawladda ee hoos yimaadda dawladda iyo qaybta gaarka ah, halkan waxa hoos imanaya hay’adaha dawladda ee sida bilaashka ah u taakuleeya nolosha gaarka ah iyo nolosha qoyska.
Kala xidhiidh qoraalka sharciga- https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=20929
Sharciga xaqsoorka ragga iyo dumarka ee shaqaalaynta iwm
Sharciga xaqsoorka raga iyo dumarka ee shaqaalaynta iwm. Waa mamnuuc eexashada ku saabsan jinsigu. Mamnuuciddu waxa ay ku saabsan tahay uurka ama guurka ama qaabka qoyska.
Sharcigani waxa uu khuseeyaa waxyaabaha la xidhiidha shaqaalaynta, bedelaadda, dallacaadda iyo xaaladda shaqada iyo suurtogalka talobixinta shaqada, tababarka shaqada, dib u tabaridda iyo naqtiimidda dugsiga. Waxa kale oo uu sharcigu khuseeyaa cid kasta oo wadda shirkad talobixineed iyo mid waxbarasho.
Waajibka sinaantu waxa kale oo uu khuseeyaa cid kasta oo dejisa xeerar oo gaadha go´aan ku saabsan hawlgalka shaqo madaxbannaan. Waxa kale oo uu ku saabsan yahay dhisidda, salaxidda ama fidinta shirkadda iyo weliba dhaqaajinta ama fidinta nooc kale oo shirkad madaxbannaan, waxa halkan hoos imanaya maalgelinta. Waxa kale ku saabsan yahay waajibka xaqsoorka cid kasta oo dejisa xeerar oo gaadha go´aanno ku saabsan waxbarashada hawsha iwm, iyo sida loo hawlgeliyo mihnadda caynkaas ah. Isla markaas waxa uu saaran yahay qof kasta oo go´aamiya xubinnimada iyo kaqaybgalka ururka shaqaalaha ama ururka shaqobixiyaha ama ururada ay xubnahoodu qabtaan shaqo gaar ah, waxa halkan hoos imanaya faa´iidooyinka ay ururadaasi siiyaan xubnaha.
Kala xidhiidh qoraalka sharciga - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30750
Sharciga sinaanta mushaharka
Tixraac sharciga ku saabsan mushahaarooyinka is le´eg ee ragga iyo dumarka, ma jiro mushahaarooyin kala duwan oo ku lugle jinsiga. Waa in uu shaqabixiyuhu mushahaarooyin is le´eg siiyaa ragga iyo dumarka, siiyaa xaalad isku mid ah shaqada isku midka ah, ama uu shaqada ka siiyaa qiime isku mid ah.
Kala xidhiidh qoraalka sharciga - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=121176
Sharciga ku saabsan xaqsoorka qolada (ee ka baxsan suuqa shaqada)
Sharciga ku saabsan xaqsoorka qoladu waxa uu mamnuucayaa eexashada ku salaysan sinjiyadda ama qolada laga soo jeedo. Sharcigani waxa uu khuseeyaa dhamaan. Waxa uu ku saabsan yahay difaaca bulshada, waxa halkan hoos imanaya caymiska bulshada iyo daryeelka caafimaadka, adeegga bulshada, waxbarashada, iyo in uu marin u haysto qaybinta alaabta iyo adeegga ay ku jirto guriyaynta u furan dadweynaha.
Mamnuucidda ku lidka ah takooridda ku saabsan marin u helidda iyo qaybinta alaabta iyo adeegga ka dhexeeya shirkadda iyo macmiisheeda, adeegdoonayaasheeda ( klienter), quuteyaasheeda, iibsadayaasheeda iwm. Halkaas waxa looga jeedaa wixii la xidhiidha gadista, adeegga, kiraynta iyo waxbaridda iwm ee shirkadda.
Sharcigan loo cuskan maayo meelaha uu daboolo sharciga ku saabsan mamnuucidda takooridda ee suuqa shaqada iwm. ama hawlqabadyo loo fulinayo hab cad oo gaar ah.
Kala xidhiidh qoraalka sharciga - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=28938
Sharciga mamnuucidda eexashada ku saabsan sinjiga iwm.
Sharcigani waa xeerciqaabeed ka duwan sharciyada medeniga ah ee xagga hore lagu soo magacaabay. Waxa looga jeedaa, in uu qofku dacwadda u gudbiyo bilayska, haddii uu rumaysto, in xuquuqdiisa meel lagaga dhacay sida uu dhigayo sharcigani. Waxa uu sharcigani farayaa, in aanu qof ku sugan hawlqabadyada ganacsiga ama kuwa samafalka oo bixinaya adeeggu takoori karin cid, isaga oo ugu duurxulaya sinji, midab, wadaniyad ama qolo uu ka soo jeedo, diin ama dareengalmeed. Sidoo kala qofka jooga rugta ganacsiga ama tan samafalka waa in aanu u diidin qof in uu marin u helo sida dadka kale ee ay isku xaaladda yihiin ee jooga goobta, jilidda, bandhigga, shirka ama wixii la mid ah ee u furan dadweynaha.
Ku xadgudubka sharcigani waxa uu keenaa ciqaab ah qasiraad ama xabsi gaadha ilaa 6 bilood.
Kala xidhiidh qoraalka sharciga - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59249
Xeerka ciqaabta §266b waxa uu mamnuucayaa hadallada hanjabaadda, cayda iyo xaqiraadda ah iyo borobagaandaha xaqiraadda ah ee koox dad ah hoos loogu dhigo sababo la xidhiidha sinjiga, midabka, jinsiyadda ama qolada ay yihiin, caqiidada ama dareenkooda galmadka. Hadalladu waa in ay noqdaan wax kor loo yidhi (offentlige) ama si ballaadhan loo baahiyay. Ku xadgudubka xeerkaasi waxa uu horseedayaa xadhig ilaa laba sano ah. Haddii hadalku ku wajahan yahay qof shakhsi ah, oo aanu hadalku ku wajahnayn koox uu ka tirsan yahay qofku, markaas arrintu waxa ay noqonaysaa meel ka dhac lagu sameeyay xorriyadda ama sharafta qofka sidu qeexayo xeerka ciqaabtu.
Sida ku qeexan xeerka ciqaabta §81, ee lanbarkiisu yahay 6, caadi ahaan ciqaabtu waxa ay ku salaysan tahay duruuf la adkeeyay, oo ah in eedaysanuhu asal ahaan ka tirsan yahay qolo kale, haysto caqiido kale ama dareenkiisa jinsiga ka duwan yahay iwm. Ujeedada qodobku waa in kiisaska caddaymuha qayb ahaan ama giddigoodba lagu tirin karo xaaladdaas. Faahfaahinta ereyada “qolada asal ahaan laga soo jeedo, caqiidada, dareenka jinsiga iwm” waa in bilawga horeba lagu xusaa xeerka ciqaabta §266b. Xeerka ciqaabta §81, ee lanbarkiisu yahay 6 kuma xadaysna noocyada denbiyada ama xaalad, uu eedaysanuhu u hanjabo, caayo ama xaqiro qof ama koox dad ah. Qodobku waxa kale oo tusaale ahaan loo adeegsan fal denbiyeed la xidhiidha dhaqaale lagu taageero urur cunsuri ah, oo eedaysanuhu ka yahay xubin.
Gacanka qoraalka xeerka - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=133530
Xeeararka maamulka ee gundhigga u ah sinaanta
Dhaqanka maamulka deenishka waxa ku jira dhawr xeer oo gundhig ah, oo shuruud u ah maamulka. Mid ka mid ah xeerarkaas gundhigga ah ayaa sheegaya, in sharciga loo wada sinaado oo si isku mid ah loola dhaqmo dadka. Waxa uu ku xidhan yahay shardiga ah, in go´aamada ka soo baxaya xafiiska maamulka lagu saleeyo waxa kiisku yahay uun. Taas macnaheedu waxa weeye, haddii kiis gaar ah aanay da’du ahayn kiiska laftiisa, markaas kommuunuhu ma soo gelin karo go´aanka da’da, taasoo tusaale ahaan ka dhigaysa dadka waawayn (waayeelka) in ay ka la liitaan dadka kale ee la xaaladda ah.
Tusaalooyinka shaqaalaynta ee EU-da: (Tusaalooyinka guurtida 2000/78/EF ee 27. november 2000 ee la xidhiidha xeerarka guud ee u sinaanta shaqaalaynta iyo xirfadaha).
Ujeeddada tusaalahani waa in lala dagaallamo eexashada iyo sinaan la’aanta.
Tusaalooyinka sinaanta ee EU-da: (Tusaalooyinka guurtida 2000/43/EF ee 29. juni 2000 ee la xidhiidha meelmarinta mabaadii’da sinaanta dadka oo dhan, iyadoo aan la danayn sinji ama qolo).
Ujeeddada tusaalahani waa in lala dagaalamo eexashada iyo sinaan la’aanta.
Tusaalooyinka EU-da ee la xidhiidha sinaanta ragga iyo dumarka ee dhinacyada dheefta alaabooyinka iyo adeegga: (Tusaalooyinka guurtida 2004/113/EC ee 13. december 2004 ee la xidhiidha meelmarinta mabaadii’da sinaanta ragga iyo dumarka ee dhinacyada dheefta alaabooyinka iyo adeegga).
Tusaalooyinka EU-da ee dhaqangelinta mabaadi’da la xidhiidha u sinaanta fursadaha iyo sinaanta ragga iyo dumarka ee dhinacyada shaqada iyo xirfadda: (Tusaalooyinka guurtida 2006/54/EC ee 5. juli 2006 ee la xidhiidha dhaqangelinta mabaadii’da u sinaanta fursadaha iyo sinaanta ragga iyo dumarka ee dhinacyada shaqada iyo xirfadda).
Tusaalooyinka EU-da waxa lagu meelmariyay xeerarka dheenishka, iyadoo lagu ansixiyay xeerar kala duwan.